Farqiga ereyo la isku khaldo: (Magacaabis/Doorasho, Dakhli/kharash, dowlad/xukuumad, mushaar/gunno) | Somali Wiki
Home / Af Soomaali / Farqiga ereyo la isku khaldo: (Magacaabis/Doorasho, Dakhli/kharash, dowlad/xukuumad, mushaar/gunno)
Posted by: somaliwi in Af Soomaali, Uncategorized February 22, 2017	Comments Off on Farqiga ereyo la isku khaldo: (Magacaabis/Doorasho, Dakhli/kharash, dowlad/xukuumad, mushaar/gunno) 535 Views
Magacaabis iyo Doorasho: Magacaabis waa marka mas’uul uu xil u magacaabo mas’uul kale oo ka hooseeya. Tusaale, Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya lama doorto ee waxaa xilka u magacaaba Madaxweynaha. Sidoo kale wasiirrada xilka waa loo magacaabaa ee iyaguna lama doorto. Hase yeeshee doorasho waa in qofka uu ku soo baxo qaab doorasho la codeeyay. Tusaale ahaan madaxweynaha Soomaaliya waxaa doorta baarlamaanka, sidoo kale Guddoomiyaha Baarlamaanka waxaa doorta Baarlamaanka.
Dakhli iyo Kharash: Weriyeyaasha qaarkood waxay isku khladaan labadan erey. Dakhli waa dhaqaalaha soo gala qof, wasaarad, hay’ad ama dal. Kharashna waa waxa ka baxa qofka, wasaaradda, hay’adda, ama dalka.
Haddaba halkii aad ka dhihi lahayd “Kharashka Dalka ka soo gala dekedda”, waxaa habboon inaad tiraahdo “Dakhliga Dalka ka soo galaya dekedda”.
Dowlad iyo Xukuumad: Dowlad (State) waxa ay ka kooban tahay dhul, dad iyo xukuumad. Xukuumad waa qeybta fulinta ee ka kooban raysal-wasaaraha iyo golihiisa wasiirrada. Inkastoo ereyadan aysan si fiican ugu kala baxsaneyn Soomaalida, haddana waxaa habboon in weriyuhu la socdo isticmaalkooda. Tusaale haddii weriyuhu doonayo inuu ka hadlo Golaha Wasiirrada oo kaliya, waxaa habboon inuu adeegsado ‘xukuumad’.
Mushaar iyo Gunno: ‘Mushaar’ waa lacagta shaqaaluhu qaataan bishii. Hase yeeshee, ‘gunno’ waa lacag ka dheeri ah mushaarka oo loogu talogalay qofku inuu isaga bixiyo kharashaad kale ama uu ku muteysanayo waqti ama shaqo dheeri ah.
AM iyo PM: Soomaalida qaarkood oo ay ku jiraan qaar saxafiyiin ah waxay isku khaldaan qoraalka waqtiyada ay gadaal kala socoto (AM ama PM). AM waxaa loola jeedaa waqtiga ka soo billowda habeenkii 12ka saq dhexe illaa 12 duhurkii, halka PM loola jeedo waqtiga u dhexeeyaa 12ka duhurkii illaa habeenkii saq dhexe.
Waxaa kaloo la isticmaalaa in 24ka saac hal qaab loo qoro oo aan loo baahan in AM ama PM gadaal laga raaciyo waqtiga. Tusaale halkii laga qori lahaa 01:00pm waxaa loo qorayaa 13:00, taasoo micnaheedu yahay halkii duhurka kadib laga soo billaabi lahaa 1pm, waxaa 1 lagu darayaa 12kii duhur, markaasna waxay noqoneysaa 13.
Previous: Baro Sharciga Xarfaha laba-laabma iyo tusaale
Next: Ma loo baahan yahay aqoon iyo waayo aragnimo maamul?